ခရစ်တော် ပြန်လာချိန်နီးပြီ - ခရစ်တော် ပြန်လာချိန်နီးပြီ December 30, 2017 · || ယေရှူဆလင်သို. အမေရိကန်သံရုံးရွှေ.ခြင်းသည်
နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ခရစ်တော်ပြန်လာချိန်နီးတဲ့ ကမ္ဘာ ဖြစ်ရပ်များအကြောင်း
January 28 at 2:12pm ·
|| မနေ.က Argentina (Buenos Aires) ၌ အံဖွယ်ရာ နိုးထမှုဖြစ်ပြီး
|| နှစ်ရှည်လများ နားမကြား၊ မျက်မမြင် ၊ လမ်းမလျှောက်နုိင်သူများစွာ
|| လွတ်ခြင်းအခွင်.ရကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သို.ယ္ခင်နှစ်က ရောက်ခဲ.သူ
|| ဆရာကြီးA.Bisonni ကို အားလုံးမှတ်မိကြမှာပါ။သိရိလကာင်္နိုင်ငံသို.
|| မကြာခင် သွားမည်ဖြစ်၍ ဆုတောင်းပေးကြဖို. တင်ပြ ထားပါသည်။
January 22 at 8:49pm ·
|| ယနေ. VP Pence မိန်.ခွန်းကို ဆန်.ကျင်ပြီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ပြုသည်.
|| Arab-Israeli နိုင်ငံရေး သမားများ ရှေ.မှောက်မှာ ယေရှုဆလင်သည်
|| လွန်ခဲ.သော နှစ် ၃၀၀၀ ကထဲက ဒါဝိတ်မင်း၏ မြ်ို.တော်ဖြစ်ကြောင်း၊
|| နောက်နှစ်မကုန်မီ အမေရိကန်သံရုံးကို ယေရှုဆလင်၌ ဖွင်.လှစ်မည်ဟု
|| Donald Trump ၏ မိန်.ခွန်းကို ပြတ်သားစွာ အတည်ပြု ခဲ.သည်။
January 18 at 8:26pm ·
|| မင်းသေခါနီးမှဆေးရုံပို့တာ..နောက်ကျသွားပြီ- ဒီလူကို ရေခဲတိုက်နဲ.
|| နီးတဲ.နေရာ သွားထားကြဟု...ဆေးရုံမှဆရာဝန် ပြောခဲ.သော်လည်း
|| အသက်ရှင်သော ယေရှုဘုရားထံ ဒူးထောက်ဆုတောင်းသည်.အခါ
|| နဂိုမူလအတိုင်း ကျန်းမာရွှင်လန်းစွာ အသက်ရှင်ခွင်.ရသော အံ.ဖွယ်
|| မယုံကြည်သူ(ဦးအုန်းမောင်)၏ သက်သေခံချက်။ God Is Good.
January 17 at 4:02pm ·
|| ထာဝရအသက်ရှင်သော ဘုရားကို ရရှိသွားသော ဗိုလ်မှူးဇော်လွင်ရွှေ ||
|| (စစ်တက္ကသိုလ်သင်္ချာဌါန၊ လ/ထ ကထိက) ဖြစ်ရပ်မှန် သက်သေခံချက် ||
၁၄/၁/၂၀၁၇ ရက်နေ့၌ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တစ်ဦးအဖြစ်မှ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် အဖြစ် လုံးလုံးလျားလျားပြောင်း သွားသည်. သတင်းကြောင့် ဒေါသူပုန် ထနေကြသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အနေဖြင့် မ ဖက်ပါ၍ မိုက်ဇာတ်ခင်း သွားသူ သာသနာ ဖျက်မယ့် အမျိုးယုတ် စကောလောက်မှ စောက်မနက်သူ စသည်ဖြင့် လက်ညိုးထိုး ကဲ့ရဲ့နေလင့် ကစား အသက်ရှင်တဲ့ ထာဝရ ဘုရားအား လက်ခံယုံကြည်၍ ဘာသာကူးပြောင်း သွားရခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဗိုလ်မှူးမှ လူသိရှင်ကြား တရားဝင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြား ခဲ့သည်။
ဗိုလ်မှူးက " ခုသူများကဲ့ရဲ့သလို ကျနော်က ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီးကိုယူ လိုက်လို့ ဘာသာပြောင်းသွားတာမဟုတ်ပါဘူးး ကျနော်ကိုယ်တိုင် အသက်ရှင်တဲ့ ဘုရားကို ရှာဖွေနေတာကြာပါပြီ။ ခရစ်တော်ရဲ့နှုတ် ကပတ်တော်တွေကို ကျနော်လေ့လာ တယ်။ ဆန်းစစ်တယ် ပြီးတော့မှ လက်ခံတာပါ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်
သွားလို့ ကျနော် ဒီရာထူး ကနေနောက်ထပ်မျှော်လင့်ချက် မရှိတော့မှန်း သဘော ပေါက် ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အသက်ရှင်တဲ့ ထာဝရဘုရားကို လက်ခံယုံကြည် ရလို့ အတိုင်းမသိ ဝမ်းသာပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာမှာ ဘုရားသခင် ကိုယ်တိုင်ပြော ထားတာရှိတယ် မတူညီတဲ့ ထမ်းပိုးကို မထမ်းပါနဲ့တဲ့။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ တစ်ယောက် တစ်ဘာသာဖြစ်နေရင် မလွယ်ဘူးလေ။ ခုတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဝင်ဖြစ်သွားတော့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားတယ် သာယာတဲ့ ခရစ်ယာန် အိမ်ထောင်ဖြစ်အောင်ကြိုး စားသွားမှာပါ " ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
ဘာသာခြားများအတွက် တစ်ဆင့်မြင့်ရာထူး ရယူရန်ခက်ခဲလှသည့် တပ်မတော်တွင် စစ်တက္ကသိုလ်ကဲ့သို့တပ်မတော်၏ စစ်သင်တန်းကျောင်းမှ လက်ထောက်ကထိက အဆင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးတစ်ဦး မိရိုးဖလာကိုး
ကွယ်ခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာအား မိမိ၏တက်လမ်းအခွင့် အရေးများနှင့် လဲလှယ်ကာ ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ကူး ပြောင်းသွားမှုသည် အဆန်း တကြယ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအ ဖြစ်ရှိနေမည်မှာ သေချာလှပေတော့သည်။
(ကောင်းကင်စာစောင်၌ စာရင်းဝင်ပြီဖြစ်သော ဗိုလ်မှူး၏မိသားစုအား
(အသက်ရှင်သော ဘုရားသခင်က သာ၍ မြင်.သောရာထုးချီးမြင်.ကာ
(ကောင်းချီးများစွာ ၂၀၁၈ မှာ လက်ဆက်ရေတွက် နိုင်ပါစေ ...အာမင်း)
Mozart Thang -Credit to -လွင်ကိုကိုထက်
|| ISREAL နိုင်ငံနှင်. ဂျူးလူမျိုးကိုကာကွယ်ရန် အကောင်းဆုံးသော
|| နည်းလမ်းက ဘာလဲလို. အစ္စရေးဝန်ကြီး Nethanjahu ကို မေးရာ
“ အရွယ်ရောက်သူတိုင်း တပ်ထဲဝင်ရမယ်၊ခေတ်မှီစစ်လက်နက်တွေ
|| ပိုင်ဆိုင်ရမယ်” ဆိုတာတွေ လုံးဝ မပြောဘူး၊ အစ္စရေးနဲ. ဂျုးလူမျိုးကို
|| ကာကွယ်ဖို. အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက သမ္မာတရားအပေါ်ရပ်တည်ခြင်း
|| Standing in the TRUTH လို. ပြောပါတယ်။ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံ.ခေါင်းဆောင်ကို
|| ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးမပေးပဲ အဘယ်သို. နေမည်နည်း၊...အာမင်း.......။
|| ယေရှူဆလင်သို. အမေရိကန်သံရုံးရွှေ.ခြင်းသည်
|| ယေရှုဆလင်၌ တတိယဗိမာန်တော် ပြန်လည်
|| တည်ဆောက်မည်. ပထမ ခြေလှမ်းဖြစ်ကြောင်း၊
|| ခရစ်တော်ပြန်လည်ကြွလာဖို. နေ.၊ရက်၊အချိန်နာရီ
|| မသိရသော်လဲ ကာလအချိန်အားသမ္မာကျမ်းအရသိခွင်.
|| ပေးထားသည်၊ဆရာကြီး Rev.Kap K Khup)ဝေဌချက်။